विष्णु पुराण भन्छ, 'यी चार प्रकारका युवतीसँग विवाह नगर्नुस्'
विष्णु पुराण भन्छ, ‘यी चार प्रकारका युवतीसँग विवाह नगर्नुस्’
विवाह मानव जीवनकै एक महत्वपूर्ण संस्कार हो । केही अपवाद्हरुलाई छाड्ने हो भने विवाहले मानुष्य जीवनलाई सुखद् र व्यवस्थित बनाउँछ । साथै संसारको श्रृष्टी चक्र धान्नका लागि पनि विवह अत्यावश्यक छ ।
वैवाहिक जीवन सबैको सुखद् नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । विवाह गरेर दु:ख पाएका मानिसहरुको संख्या पनि प्रसस्तै देख्न सकिन्छ । त्यसैले विवाह गर्नुअगावै असल जीवनसाथी खोज्नु जरुरी छ ।
कस्तो छान्ने त जीवनसाथी ? हिन्दू धर्म शास्त्र विष्णु पुराणमा स्त्रीहरुको विषयमा थुप्रै कुरा गरिएको छ । यो पुराणमा विवाहका लागि ४ प्रकारका युवती अयोग्य हुनेसमेत उल्लेख छ ।
Child marriage. Illustration: Ratna Sagar Shrestha
यस्ता हुन् ति चार प्रकारका युवती
१. खराब बोली भएकी/कटु वचन बोल्ने
भनिन्छ, मिठो बोलीमा सरस्वतीको बास हुन्छ । सरस्वतीलाई बाणीकी देवी समेत भनिन्छ । मिठो बोली बोल्ने स्त्रीसँग सरस्वती सँधै प्रसन्न हुने पुराणहरुमा उल्लेख छ । कटु वचन बोल्ने स्त्रीको स्वभाव पनि बोली जस्तै हुन्छ । यस्ता स्त्रीले घरको शान्ति खल्बल्याउँछन् भन्ने विष्णु पुराणमा उल्लेख छ ।
२. सात पुस्ते नाता भित्रको युवती
हिन्दू धर्म संस्कारमा नाता पर्ने युवतीसँग विवाह गर्नुहुँदैन । सहगोत्रीसँग पनि विवाह अमान्य छ । विष्णु पुराणमा माता वा पिता कसैको पनि नाता पर्ने युवतीसँग विवाह गर्दा विभिन्न अनिष्ठ हुने उल्लेख छ । वैज्ञानिकहरुले समेत नजिकको सम्बन्धमा विवाह घातक हुने बताइसकेका छन् । शास्त्रमा कम्तिमा सात पुस्ता भन्दा टाढा पुगेपछि मात्र विवाह गर्नु राम्रो मानिएको छ ।
३. परपुरुष र दुष्ट पुरुषसँग सम्बन्ध भएकी
विवाह अघि नै परपुरुषसँग सम्बन्ध भएकी र दुष्ट पुरुषको संगत गर्ने स्त्रीलाई पनि विष्णु पुराणले विवाहका लागि अयोग्य मानेको छ । यस्ता युवतीलाई विवाह गर्दा जीवनमा संकट आइलाग्न सक्छ ।
४ अल्छी र ढिलासम्म सुत्ने
अल्छि हुनु स्त्रीका लागि असोभनी हुने विष्णु पुराणमा उल्लेख छ । अल्छी र ढिलासम्म सुत्ने युवती आलसका प्रतिक हुन् । आलसी युवतीले घरमा कुनै पनि राम्रो काम गर्न सक्दिनन् । फोहोर र अल्छीको घरमा लक्ष्मीले बास नगर्ने धार्मिक विश्वासमेत छ ।